အချစ်ရေးမှာ သူမှသူဖြစ်နေအောင်လုပ်တတ်တဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ ဗျူဟာကို ပြန်ချေနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေး - Myannewsmedia
အချစ်ရေးမှာ သူမှသူဖြစ်နေအောင်လုပ်တတ်တဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ ဗျူဟာကို ပြန်ချေနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေး
By phyoPosted on December 8, 2019
မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ကို ရဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အခါမျိုးမှာ ယောက်ျားေ တွက သုံးတတ်တဲ့ အချစ်ဗျူဟာ (၅)မျိုးအကြောင်းကို ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ဒီတစ် ခါမှာတော့ အဲ့ဒီဗျူဟာတွေကို ဘယ်လိုမျိုး တန်ပြန်တိုက်စစ်ဆင်ပြီး ပြန်ချေရမလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးမှာပါ။တစ်ဖက်လူရဲ့ စိတ်ကို ကစား၊မာယာတွေ သုံးပြီး ကိုယ့်ဘက်ကို ကျလာအောင်၊တစ်နည်းအားဖြင့် သူတို့က လိုက်နေရတဲ့ ဘ၀ကနေ ကိုယ်က လိုက်နေရတဲ့ ဘ၀ကို ရောက်အောင် လုပ်တဲ့ အေ လျှာ့အတင်း ဗျူဟာတွေကို တန်တိုက်စစ်အဖြစ် ပြောင်း ချင်ရင်တော့….
နေ့တိုင်း အဆက်အ သွယ်လုပ်၊ ဖုန်းဆက်၊မက်ဆေ့ခ်ျပို့တာ၊နေ့တိုင်း လာစောင့် တာမျိုး လုပ်ပြီးမှ ရုတ်တရက် ပျောက်ချက်သားကောင်းသွားပြီး အဆက်အ သွ ယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ အခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး လုပ်ရမှာတစ်ခုရှိ ပါတ ယ်။ဒီကြားထဲမှာ သူနဲ့ကိုယ့်ကြားမှာ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ခု ရှိခဲ့လားဆိုတာကို အရင်ပြန်စဉ်းစားပါ။မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီလိုခင်းလာတဲ့ ဗျူဟာအတွက် အေ ကာင်းဆုံး တန်ပြန်တဲ့နည်းကတော့ ဒီအတိုင်းထားလိုက်ပါ။ရုတ်တရက် အ ဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်တာကြောင့် ရင်ထဲမှာ နေရခက်နေမယ်ဆိုတာ ကို လည်း သိပေမယ့် သူအဆက်အသွယ်မလုပ်ရင် ကိုယ်လည်း အဆက်အ သွယ် မလုပ်တာက အကောင်းဆုံးပါ။တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင့်ဆီကို သူရောက်အောင်လာမှာပါ။
ဒီကြားထဲမှာ သူ့ဘက်ကနေ ပြန်ပြီး အဆက်အသွယ်လုပ်လာခဲ့ရင်တော့ သင့် အပေါ်မှာထားတဲ့ သူ့ရဲ့ စိတ်က သေချာသလောက်ရှိနေပါပြီ။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ သင့်ဘက်ကနေ အရင်လောက် အရမ်းကြီးအေးစက်မပြတော့ပဲ နည်းနည်းလေး လိုက်လျောညီထွေနေပေးပါ။ဥပမာ- အလုပ်တွေအရမ်းများနေတယ်ထင်တယ် ဆိုတဲ့စကားလောက်တော့ပြောပြီး လောက၀တ်ပြုပေးလိုက်ပါ။ ဒီစကားလော က်ဆိုရင်တော့ တော်ရုံ ယောက်ျား ဆိုရင် သင်သူ့ကို မျှော်နေတယ်ဆိုတာကိုလ ည်း သဘောပေါက်မှာပါ။
ဒီနည်းကတော့ သင့်စိတ်ကို သ၀န်တိုလာအောင် လုပ်ပြီး အချစ်ကို ဆွဲထုတ် ချင်ရင် သုံးတဲ့နည်းပါ။အကောင်းဆုံးနည်းကတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အေးဆေးလေးနေပြလိုက်တာပါ။ဒီလိုဆိုရင်တော့ သင့်စိတ်ကို နည်းနည်းလေး ကသိကအောက်လုပ်ချင်တဲ့ သူ့ရဲ့ဗျူဟာက သူ့ကိုပြန်ထိသွားပါလိမ့်မယ်။ တ ကယ်လို့များ သင့်စိတ်က သူ့ဘက်ကို အရမ်းပါနေတယ်။သိပ်ပြီးတော့ မူမနေ ချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ စိတ်ဆိုး၊စိတ်ကောက်ချင်ယောင်ဆောင်ပြလိုက်ပါ။အဲ့ ဒီလိုဆိုရင်တော့ သူ့ဘက်က ပြန်လိုက်ချော့ပါလိမ့်မယ်။သ၀န်တို ပြတာထက် စာရင် စိတ်ဆိုးပြလိုက်တာက ပိုကောင်းတဲ့နည်းပါ။(အနည်းဆုံးတော့ ပြန်အချော့ခံရနိုင်တယ်လေ)
(၄)နောက်ကျပြီးမှ Reply ပြန်တာ၊ဖုန်းမကိုင်တာတွေဆိုရင်…..
ချက်ချင်း reply ပြန်ရင် ရရဲ့သားနဲ့ ကိုယ့်ကို တမင်စောင့်နေရအောင်လုပ်တဲ့ အကွက်တွေကို ချိုးနေပြီဆိုရင်တော့ တစ်ခါပို့လို့မှ reply မလာတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ၊ ကိုယ်ဆက်လို့မှ ပြန်မဆက်ပဲ တမင်စောင့်ခိုင်းထားတဲ့ ဖုန်း calls မျိုးကို ဘယ်တော့ မှ အချိန်ကုန်ခံမစောင့်ပါနဲ့။တစ်ကြိမ်ကနေ နှစ်ကြိမ် ကိုယ့်ဘက် ကနေ မက်ဆေ့ခ်ျပို့တာ၊ဖုန်းခေါ်တာမျိုးလည်း မလုပ်ပါနဲ့။သူပြန်ဆက်တဲ့ အခါမှာလည်း မကိုင်ပဲ၊ချက်ချင်း reply မပြန်ပဲထားပြီး လက်စားချေလိုက်တာက အကောင်းဆုံးနည်းပါ။ကိုယ့်စောင့်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်ထက် သူ့ကို နှစ်ဆ ပြန်စောင့်ရအောင် လုပ်လိုက်ပါ။
အရင်တုန်းကတော့ သူ့ဘက်နေ သင့်ကို ခခယယလိုက်နေ၊အရမ်းကို နွေးထွေး၊ အရမ်းဂရုစိုက်ပြခဲ့ပြီးမှ ရုတ်တရက်ကြီး သူ့ဘက်ကရော၊ကိုယ့်ဘက်မှာပါ ဘာ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာမှ မရှိပဲ အေးစက်သွားပြီလား..?ဒီလိုဆိုရင်တော့ ငါ ဘာများမှားသွားလို့လဲ..?လို့တွေးပြီး အလောတကြီး သူ့နောက်ကို လိုက်ဖို့ မ စဉ်းစားပါနဲ့။အရင်ဆုံး သူနဲ့ကိုယ့်ကြားမှာ ထူးထူးခြားခြား အဆင်မပြေတာ၊ြ ပဿနာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိလား ပြန်စဉ်းစားပါ။အဲ့ဒီလိုမရှိခဲ့ရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ချေက နှစ်ခုရှိပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ပြောင်းတာ (သို့)သင်သူ့ဆီကို ကြွေကျ လာအောင် သုံးလိုက်တဲ့ အပြင်းစားစိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးနည်း။ဒီအထဲက ပထမတစ်ချက်ဆိုရင်တော့ လိုက်မနေပါနဲ့။ဒီတိုင်းထားလိုက်ပါ။
အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒါဟာ သင့်ကိုစိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးဆင်း လိုက် တာပါ။ဒီနေရာမှာ ရွေးစရာနှစ်ခုရှိပါတယ်။သင်က စိတ်ဓါတ်မာပြီး တကယ့်အ ဆုံးထိ တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာလား(ဒါမှမဟုတ်)အဲ့ဒီ လိုတွေ မဟုတ်ပဲ မူမနေချင်ေ တာ့ ဘူးဆိုပြီးလက်မြှောက် အရှုံးပေးမှာလား..?ပထမအချက်ဆိုရင်တော့ တန်ပြ န်နည်း က ဒီအတိုင်းထားလိုက်ပါ။သူမရှိလည်း (သေချာပေါက်ရင်ထဲမှာ ဟာနေ မှာဆိုပေမယ့်)အပြင်မှာတော့ ဘာမှမဖြစ်သလို နေပြလိုက်ပါ။အဲ့လိုမှ မဟုတ်ဘူး ဆိုရင်တော့ နည်းနည်းလေး နွေးထွေးပျော့ပျောင်းပေးလိုက်ပါ။အရမ်းကြီးလည်း မဟုတ်ပဲ..ဒီအတိုင်းအာလပသလာပစကားလေးတွေ ပြောပြီး သူ့စိတ်ကို တီးေ ခါက်ကြည့်လိုက်ပါ။ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့စိတ်ဘယ်လိုရှိနေသေးလဲဆိုတာကို စကားပြောကြည့်လိုက်ရင် သိပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး ရှေ့ဆက်တိုးသင့်၊မတိုးသင့်ကိုတော့ မီးစင်ကြည့်ကဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာ အဆင်ပြေကြပါစေ..
မိနျးကလေး တဈယောကျရဲ့ အခဈြကို ရဖို့ ကွိုးစားတဲ့ အခါမြိုးမှာ ယောကျြားေ တှက သုံးတတျတဲ့ အခဈြဗြူဟာ (၅)မြိုးအကွောငျးကို ဖျောပွခဲ့ဖူးပါတယျ။ဒီတဈ ခါမှာတော့ အဲ့ဒီဗြူဟာတှကေို ဘယျလိုမြိုး တနျပွနျတိုကျစဈဆငျပွီး ပွနျခရြေမလဲ ဆိုတဲ့ အကွောငျးကို ဖျောပွပေးမှာပါ။တဈဖကျလူရဲ့ စိတျကို ကစား၊မာယာတှေ သုံးပွီး ကိုယျ့ဘကျကို ကလြာအောငျ၊တဈနညျးအားဖွငျ့ သူတို့က လိုကျနရေတဲ့ ဘဝကနေ ကိုယျက လိုကျနရေတဲ့ ဘဝကို ရောကျအောငျ လုပျတဲ့ အေ လြှာ့အတငျး ဗြူဟာတှကေို တနျတိုကျစဈအဖွဈ ပွောငျး ခငျြရငျတော့….
နတေို့ငျး အဆကျအ သှယျလုပျ၊ ဖုနျးဆကျ၊မကျဆခြေျ့ပို့တာ၊နတေို့ငျး လာစောငျ့ တာမြိုး လုပျပွီးမှ ရုတျတရကျ ပြောကျခကျြသားကောငျးသှားပွီး အဆကျအ သှ ယျဖွတျလိုကျတဲ့ အခွအေနမြေိုးဆိုရငျတော့ အရငျဆုံး လုပျရမှာတဈခုရှိ ပါတ ယျ။ဒီကွားထဲမှာ သူနဲ့ကိုယျ့ကွားမှာ ပွဿနာတဈစုံတဈခု ရှိခဲ့လားဆိုတာကို အရငျပွနျစဉျးစားပါ။မရှိခဲ့ဘူးဆိုရငျတော့ ဒီလိုခငျးလာတဲ့ ဗြူဟာအတှကျ အေ ကာငျးဆုံး တနျပွနျတဲ့နညျးကတော့ ဒီအတိုငျးထားလိုကျပါ။ရုတျတရကျ အ ဆကျအသှယျဖွတျလိုကျတာကွောငျ့ ရငျထဲမှာ နရေခကျနမေယျဆိုတာ ကို လညျး သိပမေယျ့ သူအဆကျအသှယျမလုပျရငျ ကိုယျလညျး အဆကျအ သှယျ မလုပျတာက အကောငျးဆုံးပါ။တကယျခဈြတယျဆိုရငျ ဘယျလိုပဲ ဖွဈဖွဈ သငျ့ဆီကို သူရောကျအောငျလာမှာပါ။
ဒီကွားထဲမှာ သူ့ဘကျကနေ ပွနျပွီး အဆကျအသှယျလုပျလာခဲ့ရငျတော့ သငျ့ အပျေါမှာထားတဲ့ သူ့ရဲ့ စိတျက သခြောသလောကျရှိနပေါပွီ။အဲ့ဒီလိုဆိုရငျတော့ သငျ့ဘကျကနေ အရငျလောကျ အရမျးကွီးအေးစကျမပွတော့ပဲ နညျးနညျးလေး လိုကျလြောညီထှနေပေေးပါ။ဥပမာ- အလုပျတှအေရမျးမြားနတေယျထငျတယျ ဆိုတဲ့စကားလောကျတော့ပွောပွီး လောကဝတျပွုပေးလိုကျပါ။ ဒီစကားလော ကျဆိုရငျတော့ တျောရုံ ယောကျြား ဆိုရငျ သငျသူ့ကို မြှျောနတေယျဆိုတာကိုလ ညျး သဘောပေါကျမှာပါ။
ဒီနညျးကတော့ သငျ့စိတျကို သဝနျတိုလာအောငျ လုပျပွီး အခဈြကို ဆှဲထုတျ ခငျြရငျ သုံးတဲ့နညျးပါ။အကောငျးဆုံးနညျးကတော့ မသိခငျြယောငျဆောငျပွီး အေးဆေးလေးနပွေလိုကျတာပါ။ဒီလိုဆိုရငျတော့ သငျ့စိတျကို နညျးနညျးလေး ကသိကအောကျလုပျခငျြတဲ့ သူ့ရဲ့ဗြူဟာက သူ့ကိုပွနျထိသှားပါလိမျ့မယျ။ တ ကယျလို့မြား သငျ့စိတျက သူ့ဘကျကို အရမျးပါနတေယျ။သိပျပွီးတော့ မူမနေ ခငျြတော့ဘူးဆိုရငျတော့ စိတျဆိုး၊စိတျကောကျခငျြယောငျဆောငျပွလိုကျပါ။အဲ့ ဒီလိုဆိုရငျတော့ သူ့ဘကျက ပွနျလိုကျခြော့ပါလိမျ့မယျ။သဝနျတို ပွတာထကျ စာရငျ စိတျဆိုးပွလိုကျတာက ပိုကောငျးတဲ့နညျးပါ။(အနညျးဆုံးတော့ ပွနျအခြော့ခံရနိုငျတယျလေ)
(၄)နောကျကပြွီးမှ Reply ပွနျတာ၊ဖုနျးမကိုငျတာတှဆေိုရငျ…..
ခကျြခငျြး reply ပွနျရငျ ရရဲ့သားနဲ့ ကိုယျ့ကို တမငျစောငျ့နရေအောငျလုပျတဲ့ အကှကျတှကေို ခြိုးနပွေီဆိုရငျတော့ တဈခါပို့လို့မှ reply မလာတဲ့ မကျဆခြေျ့၊ ကိုယျဆကျလို့မှ ပွနျမဆကျပဲ တမငျစောငျ့ခိုငျးထားတဲ့ ဖုနျး calls မြိုးကို ဘယျတော့ မှ အခြိနျကုနျခံမစောငျ့ပါနဲ့။တဈကွိမျကနေ နှဈကွိမျ ကိုယျ့ဘကျ ကနေ မကျဆခြေျ့ပို့တာ၊ဖုနျးချေါတာမြိုးလညျး မလုပျပါနဲ့။သူပွနျဆကျတဲ့ အခါမှာလညျး မကိုငျပဲ၊ခကျြခငျြး reply မပွနျပဲထားပွီး လကျစားခလြေိုကျတာက အကောငျးဆုံးနညျးပါ။ကိုယျ့စောငျ့ခဲ့ရတဲ့ အခြိနျထကျ သူ့ကို နှဈဆ ပွနျစောငျ့ရအောငျ လုပျလိုကျပါ။
အရငျတုနျးကတော့ သူ့ဘကျနေ သငျ့ကို ခခယယလိုကျနေ၊အရမျးကို နှေးထှေး၊ အရမျးဂရုစိုကျပွခဲ့ပွီးမှ ရုတျတရကျကွီး သူ့ဘကျကရော၊ကိုယျ့ဘကျမှာပါ ဘာ အကွောငျးတဈစုံတဈရာမှ မရှိပဲ အေးစကျသှားပွီလား..?ဒီလိုဆိုရငျတော့ ငါ ဘာမြားမှားသှားလို့လဲ..?လို့တှေးပွီး အလောတကွီး သူ့နောကျကို လိုကျဖို့ မ စဉျးစားပါနဲ့။အရငျဆုံး သူနဲ့ကိုယျ့ကွားမှာ ထူးထူးခွားခွား အဆငျမပွတော၊ွ ပဿနာ ဖွဈခဲ့တာတှရှေိလား ပွနျစဉျးစားပါ။အဲ့ဒီလိုမရှိခဲ့ရငျတော့ ဖွဈနိုငျခကြေ နှဈခုရှိပါတယျ။နောကျတဈယောကျပွောငျးတာ (သို့)သငျသူ့ဆီကို ကွှကြေ လာအောငျ သုံးလိုကျတဲ့ အပွငျးစားစိတျဓါတျစဈဆငျရေးနညျး။ဒီအထဲက ပထမတဈခကျြဆိုရငျတော့ လိုကျမနပေါနဲ့။ဒီတိုငျးထားလိုကျပါ။
အဲ့ဒီလိုမဟုတျဘူးဆိုရငျတော့ ဒါဟာ သငျ့ကိုစိတျဓါတျစဈဆငျရေးဆငျး လိုကျ တာပါ။ဒီနရောမှာ ရှေးစရာနှဈခုရှိပါတယျ။သငျက စိတျဓါတျမာပွီး တကယျ့အ ဆုံးထိ တိုကျပှဲဝငျသှားမှာလား(ဒါမှမဟုတျ)အဲ့ဒီ လိုတှေ မဟုတျပဲ မူမနခေငျြေ တာ့ ဘူးဆိုပွီးလကျမွှောကျ အရှုံးပေးမှာလား..?ပထမအခကျြဆိုရငျတော့ တနျပွ နျနညျး က ဒီအတိုငျးထားလိုကျပါ။သူမရှိလညျး (သခြောပေါကျရငျထဲမှာ ဟာနေ မှာဆိုပမေယျ့)အပွငျမှာတော့ ဘာမှမဖွဈသလို နပွေလိုကျပါ။အဲ့လိုမှ မဟုတျဘူး ဆိုရငျတော့ နညျးနညျးလေး နှေးထှေးပြော့ပြောငျးပေးလိုကျပါ။အရမျးကွီးလညျး မဟုတျပဲ..ဒီအတိုငျးအာလပသလာပစကားလေးတှေ ပွောပွီး သူ့စိတျကို တီးေ ခါကျကွညျ့လိုကျပါ။ကိုယျနဲ့ပတျသကျပွီး သူ့စိတျဘယျလိုရှိနသေေးလဲဆိုတာကို စကားပွောကွညျ့လိုကျရငျ သိပါတယျ။ဒီနရောမှာတော့ အခွအေနကေို ကွညျ့ပွီး ရှဆေ့ကျတိုးသငျ့၊မတိုးသငျ့ကိုတော့ မီးစငျကွညျ့ကဖို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။ အခဈြရေးမှာ အဆငျပွကွေပါစေ..
Previous post စိတ်တူကိုယ်တူညီမလေး ဖွေးဖွေးနဲ့ ပွဲအတူတူတက်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကို မျှဝေလိုက်တဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်
Next post ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Sinon နဲ့ အတူရိုက်ကွင်းပေါ်က ပုံရိပ်တွေကိုမျှဝေလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်